12 / Ka caawinta –
12 / Ka caawinta
12.1 – Sidee ayaad ku caawin kartaa – 12.2 – Sida aan ku caawin karno
12.1 – Sidee ayaad ku caawin kartaa:
Waxaa lagama maarmaan ah in aan helno shirkado ama kafaalo-qaadayaal yaa bixin kara kirada Xarunteena (qiyaastii 9000 $ / sanno) iyo nambarrada internetka ee badan (sida Safaaradaha Fiktooriya, qiyaastii 2000 $ / sanad).
Fadlan ha ka waaban inaad la xiriirto milkiilayaasha shirkada leh caruur autistic ah: waanu caawin karnaa si hubaal ah, ka dibna waxay noqon doonaan kuwo ku faraxsan inay naga caawiyaan.
Haddii aad rabto, waad naga caawin kartaa inaad bixiso khadka internetka, adoo siinaya lacagta aad jeceshahay:
iyada oo loo marayo GoFundMe, kaarka deynta: http://GoFundMe.com/Autistan
iyada oo loo marayo Paypal, kula xisaabtankaaga Paypal ee hadda ama kaarkaaga deynta: fadlan halkan u tag oo hoos u deg si aad u ogaato badhanka Paypal.
Deeq walba, waxaan ku soo saarnaa qoraal ama shahaadooyin online, si dadku u ogaadaan in lacagta u socoto meesha ay tahay.
Waxaa kale oo aad dooni kartaa inaad si toos ah u bixiso biilasha (domainyada internetka iyo bixiyeyaasha martigeliya, korontada, biilka internetka, milkiilaha xafiiska, iwm)
12.2 – Sida aan ku caawin karno:
Ururkayagu wuxuu ka caawiyaa autismka iyo autism guud ahaan guud ahaan, isagoo sharaxaya, matalaya iyo ilaalinta maskaxda maskaxda, iyo autism, hay'adaha heerka sare ee qaranka iyo ururada.
Marka laga reebo dhawr jeer oo ka reebban, ma caawin karno xirfad-shaqsiyeedka ama qoysaska si ay ula tacaalaan dhibaatooyinka aan caadiga ahayn (social): taasi waa shaqada ururada bulshada, ururada autismka iyo ururada waalidiinta.
Waxaad ka hubsan kartaa Autism.org si aad u hesho ururadan iyo isku daygooda isku-kalsoonida.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan isku dayi karnaa inaan gacan ka geysano midnimada iyo taageerada, marka ururada lagama maarmaanka ah aysan jirin.
Halkan waa sidan:
Taageero loogu talagalay shabakadaha bulshada iyo hawlaha
Taageero loogu talagalay shabakadaha bulshada iyo waalidiinta 'social networks' iyo hawlaha
Ururada kulamada ee Safaaradaha (marka ay jiraan)
Taageerada degdega ah (haddii ay suurtogal tahay)
(liistada la sii wado, xadka ugu sarreeya ee macnaheena iyo hadafkeena)